Nizeria - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Nizeria
Oniversite tsara indrindra any Nizeria
Desambra 15, 2020 Maitri Jha Nizeria, fianarana
Manana andrim-panjakana sy tsy miankina maro i Nizeria. Raha ny tatitry ny UNISA dia 162 ny oniversite eto Nizeria. Ny sarany isan-taona amin'ny oniversitem-panjakana dia manodidina ny $ 125- $ 500. Na izany aza, oniversite tsy miankina dia mitentina $ 2,700 isan-taona. Nizeria
Dingana fampiharana amin'ny Visa ho an'i Nizeria
Septambra 13, 2020 Antika Kumari Nizeria, visa ho
Ny dingana Visa ho an'i Nizeria dia notsorina tokoa. Natao an-tserasera izao ny fizotry ny fangatahana visa nizeriana. Misy zavatra sasany tokony ho fantatrao alohan'ny fangatahana visa, satria misy firenena sasany izay olom-pireneny
Rafitra fitaterana any Nigeria !!
Enga anie 17, 2020 Shubham Sharma mandehana, Nizeria
Ny fitaterana any Nigeria dia ahitana ny fomba efatra avokoa. Ny ankamaroan'ny mponina dia miankina amin'ny tamba-jotra mankany amin'ny fitaterana azy ireo. Maherin'ny 80% amin'ny mponina no mampiasa fitaovam-pitaterana ihany. Manana ny tambajotra lehibe indrindra ihany koa i Nizeria
Vidin'ny fiainana any Nizeria
Desambra 6, 2019 Shubham Sharma ny vola, Nizeria
Toeram-pisakafoanana [Edit] Sakafom-pisakafoanana, Toeram-pisakafoanana tsy lafo 500.00 ₦ 362.30–1,000.00 Sakafo ho an'ny olona 2, Trano fisakafoanana antonony, 6,000.00 Mazava ho azy ₦ 3,500.00–12,000.00 McMeal ao amin'ny McDonalds (na Combo Meal mitovy) 1,600.00 ₦ 1,450.00–2,500.00 Birily ao an-trano (0.5 drafitra litatra) 300.00 ₦ 250.00–500.00 labiera nafarana (tavoahangy 0.33 litatra)
Toeram-pivarotana any Nizeria
Desambra 6, 2019 Karuna Chandna Nizeria, zavatra atao
Tinapa Shopping Resort Tinapa Shopping Resort dia toeram-pivarotana lehibe, izay ny velarany dia mihoatra ny 861,000 XNUMX metatra toradroa ny velarany, ka io no toeram-pivarotana lehibe indrindra any Nizeria, ary anisan'ny lehibe indrindra atsy Afrika. Ny toeram-pivarotana dia ao
Topy trano fandraisam-bahiny 5 any Nizeria
Desambra 6, 2019 Antika Kumari trano fandraisam-bahiny, Nizeria
1. FEDERAL PALACE HOTEL LAGOS: malaza ho iray amin'ireo hotely kintana dimy faran'izay tsara sy antitra indrindra ao Lagos, Federal Palace Hotel dia manolotra haitraitra faran'izay tsara ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra na ho an'ny vahiny fialamboly. Na inona na inona taonany, maoderina ny hotely
Fotoana INDRINDRA INDRINDRA ANY NIGERIA
Desambra 6, 2019 Shubham Sharma Nizeria, Travel
Ny fotoana tsara indrindra hankanesana any Nizeria dia amin'ny vanin-taona mafana amin'ny Nov-Jan. Tany lehibe io anefa, ary ny toetrandro dia miovaova amin'ny halehiben'ny toerana avo sy ny haavony ihany koa; Sahel ny avaratra Sahel any avaratra dia orana kely, manomboka
Ohatrinona ny vidin'ny fitsangatsanganana any Nizeria?
Raha isaky ny mpandeha tompondaka, ny vidin'ny antsalany amin'ny dia maharitra 7 andro any Nizeria dia $ 1,722 Na izany aza, mitentina 954 $ ny dia ataon'ny mpianakavy. Ny trano fandraisam-bahiny any Nizeria dia $ 27 ka hatramin'ny $ 128 isan'alina. Saingy, ho an'ny hofan-trano fialan-tsasatra rehetra,
Serivisy fampiasa amin'ny banky tsara indrindra any Nizeria
Novambra 29, 2019 Shubham Sharma ny vola, Nizeria
Toerana tsara indrindra mpizahatany hitsidika any Nizeria !!
Novambra 29, 2019 Shubham Sharma Nizeria, zavatra atao
Nizeria dia iray amin'ireo firenena eo amin'izao tontolo izao izay voatahy miaraka amin'ireo mpizahatany manam-pahaizana manokana. Raha ny marina, ny fizahan-tany dia iray amin'ireo loharano lehibe indrindra amin'ny fidiram-bola any Nigeria. Mampalahelo fa betsaka ny Nizeriana tsy hita